MY REMEMBRANCE: 2009
အဲဒီ Virtual World ထဲကို ဝင်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား၊ မကောင်းဘူးလား။ လုပ်သင့်သလား မလုပ်သင့်ဘူး။ စဉ်းစာနေတဲ့ ရက်တွေ လတွေ တော်တော်ကြာပေါ့။ သူနာမည်နဲ့ လိပ်စာကို သိနေတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်လောက်ကတည်းက။
ကျတော့်ကို ခင်လို့ invite လုပ်ထားတဲ့ အစ်ကိုကြီးတွေ သယ်ရင်းတွေ မနည်းဘူးဆိုတာ အခု အကောင့်ဖွင့်လိုက်မှ သိရတယ်။ အရင်ကတော့ ကျတော့ ဂျီမေးထဲကို ဟိုသယ်ရင်းကပို့ ဒီသယ်ရင်းကပို့တဲ့ စာလွှာလေးတွေ ရောက်လာပေမဲ့ မသိသလိုနေနေခဲ့တယ်။
ဟိုတစ်ပတ်ကမှ မြန်မာပြည်က ညီငယ်တစ်ယောက်က အဲ့ဒီမှာ အကောင့်မရှိဘူးလားလို့ မေးတယ်။ ကျတော်က မရှိဘူးလို့ ဖြေတော့ ဟာ တော်တော် ခေတ်နောက်ကျတာပဲ ဘာညာနဲ့ အပြောခံလိုက်ရတယ်။ အင်း အဲဒီအကောင့် မရှိတာနဲ့ ခေတ်နောက်ကျတယ် ဘာညာ အပြောခံရတာတော့ ဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်။
ပြီးတော့ အိမ်ကနှစ်ကောင် အားနေရင် လယ်စိုက်ရတာနဲ့ ဘာမွေးညာမွေးလုပ်ရတာနဲ့ ပြောနေကြတာ။ ကိုယ်က မသိသလိုနေပေမဲ့ ကြာလာတော့ ဘာလဲ ညာလဲတော့နည်းနည်း သိချင်လာတယ်။ ကဲ ဒါနဲ့ပဲ မထူးတော့ပါဘူး။ ဒီနေ့ နေလည် ခန အားနေတုန်း အကောင့်ဖွင့်လိုက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လယ်မစိုက်ဘူး။ ဘာမလုပ်ဘူးလို့တော့ စိတ်ကူးထားတာပါပဲ။
အကောင့်ဖွင့်ဖို့ တစ်ယောက်သောသူက သဘောမတူချင်ဘူး။ ကျတော် လျှောက်ကဲနေမှာ စိုးလို့နဲ့တူပါတယ်။ အခု အကောင့်ဖွင့်နေတုန်း သူကို သတိရနေမိတယ်။ သူ ခွင့်ပြုမှာပါလေ..(ခွင့်ပြုနော်.. ခွင့်မပြုလဲ ဖွင့်ပြီးသွားပီ)။Virtual World ထဲကိုတော့ ခြေလှမ်း တစ်လှမ်း စတင်မိနေပြီ .....။။။။
Posted by puluque at Monday, October 26, 2009 10 comments Links to this post
P for Puluque…
1. What is your name : Puluque (မွေးတုန်းက ၁၂ ပေါင်ကျော်သူမို..)
2. A four Letter Word : Push (အလုပ်တွေ မပြီးလို့ sub con: တွေကို တစ်ချိန်လုံး push လုပ်ခိုင်းနေတာ )
3. A boy's Name : PiPi Tom (ကြည့်ရနည်းလား)
4. A girl's Name : Pa Pa Wa Ti (ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်း မီးမထွန်းပဲလင်းတယ်ဆိုလို့ PUB တစ်ခု သက်သာအောင်လို့)
5. An occupation : Plumber (ပိုက်ပြင်ဆရာ.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မတတ်ပေမဲ့ ဆရာကြီးလေသံနဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ခိုင်းနေတဲ့ ကျတော်…)
6. A color : Purple (အခုတလေ အဲဒီအရောင်နဲ့ အင်္ကျီတွေကို အရမ်းကြိုက်နေပေမဲ့ အသားမဲတဲ့ ကျတော် မဝတ်ရဲဘူးဗျ)
7. Something you'll wear : Pants (မဝတ်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ…ပုဆိုးက အိမ်မှာတော့ တစ်ခါတလေ ဝတ်တယ်)
8. A food : Papaya Salad ( ဗမာလိုပဲ ပဲမှုန့်နဲ့ သုပ်သုပ်၊ ရခိုင်လိုပဲ ပုဇွန်ငါးပိနဲ့ သုပ်သုပ်၊ ယိုးဒယားလိုပဲ သုပ်သုပ် ကြိုက်ပါတယ်)
9. Something found in the bathroom : Push button ( ကိစ္စပြီးရင် အဲဒီခလုပ်လေးကို နှိပ်နေကျလေ)
10. A place : Peninsula ( အပတ်တိုင်း ရောက်နေကျပေါ့…)
11. A reason for being late : Please wake up (ထမယ်ကြံလိုက် ပြန်အိပ်လိုက်နဲ့)
12. Something you'd shout : PA PA! Help me! (စိတ်ညစ်လာရင် အော်ပစ်မယ်)
13. A movie title : P---(ဇာတ်ကားတွေအများကြီး သိတယ်ဟုတ်)
14. Something you drink : Pepsi (ရွှေပြည်ကြီးမှာ မရတာ ကြာပြီလေ)
15. A musical group : Pink Floyd (ဂျူးခဏခဏ ရေးနေလို့ တစ်ခါမှတော့ နားမထောင်ဖူးဘူး)
16. An animal : People (မျိုးနွယ်တူတယ်လေ)
17. A street name : Pine Road (ထင်းရှူးနံ့လေးတွေ မွှေးလို့)
18. A type of car : Pajero (အိမ်မှာ ဈေးသွားရင် စီးတာပေါ့)
19. The title ofasong : Power of love (အရမ်းအားပြင်းတယ်ပြောကြတာပဲ)
20. A verb : Pay me more (နည်းနည်းလေးနဲ့တော့ မရဘူးနော်)
ပ for ပုလုကွေး
1. What is your name : ပုလုကွေး
2. A four Letter Word : ပိန်ပိန်ပါးပါး
3. A boy's Name : ပေါသွပ် (သမိန်ပေါသွပ်)
4. A girl's Name : ပြာကလပ်စိန်
5. An occupation : ပလာတာသည်
6. A color : ပြာတာတာ
7. Something you'll wear : ပိတ်အင်္ကျီ
8. A food : ပိန်းဥ
9. Something found in the bathroom : ပီပါ (ရေထည့်ဖို့ပါ)
10. A place : ပျဉ်းမနား (မမဆီကို အလည်သွားမလားလို့)
11. A reason for being late : ပျင်းကြီးလို့ (အိပ်နေတာလေ)
12. Something you'd shout : ပါပါးရေ ကယ်ပါ…
13. A movie title : ပုဂံမှာသာတဲ့လ (မေသန်းနုကို ရူးရော)
14. Something you drink : ပဲနို့
15. A musical group : ပဲခူးမြို့မတီးဝိုင်း (ရှိမရှိမသိ ရမ်းတုတ်လိုက်တာ)
16. An animal : ပလာတူး
17. A street name : ပြည်တော်သာလမ်း (ချိုင့်တွေချည်းလေ)
18. A type of car : ပါဂျရိုပေါ့ (အကြမ်းစီးဖို့ပါ)
19. The title ofasong : ပျို့ဆုတောင်း (ဆရာတင်ရေးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့)
20. A verb : ပိတ်သည် (တံခါးပိတ်ထားမှ ဒါတောင် အတင်းလာနေကြသေးတယ်..)
မမတန်ခူး တဂ်တဲ့ပို့စ်လေးပါ။ ကျတော့ကို တစ်ခါမှ မတဂ်ဖူးဘူးလို့ မမကပြောပေမဲ့ ကျတော် မှတ်မိနေတာကတော့ ဒါဟာ ဒုတိယ အကြီမ် တဂ်တာပါ။ ဝိုင်းကူးကာ ခေါင်းခြောက်ခံ စဉ်းစားပေးတဲ့ တစ်ရွာကို အပိုင်းစား ကိုဝိုင်တီယူ အဲလေ ကိုရွာသားလေး (htu) ကို သိုင်းခရု သိုင်းလိပ် သိုင်းပုရွက်ဆိပ်ပါဗျာ။
Posted by puluque at Tuesday, October 20, 20097comments Links to this post
Posted by puluque at Saturday, October 10, 2009 8 comments Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က PUB Ulu-Pandan WRP ရုံးထဲသွားပြီး ပါမစ် သွားတင်တယ်။ Consultant က လူကြီးရုံးထဲ ဝင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးနေတုန်း ကျတော်က အပြင်မှာနေခဲ့ရင်း သူတို့ Notice Board မှာ ဟိုလျှောက်ဖက် ဒီလျှောက်ဖက်ရင်း အောက်က စာလေးတွေကို တွေ့လို့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ စင်္ကာပူ ဘဝ တွေထင်ဟတ်တာပေါ့။
In Singapore, the majority of us live in Highly Dangerous Buildings (HDB),And most people have already got used to Paying and Paying (PAP).Not only do you have to pay, you Pay Until Bankrupt (PUB).
When you fall sick and happen to be admitted toaMoney Operating Hospital (MOH),You might be able to use your Cash Prior to Funeral (CPF) fund.If you are out of luck, you may meet doctors who Never Use Heart (NUH) to treat you,And you will be Sure to Give up Hope (SGH).
To help ease the traffic, motorists have to pay Cash On Expressway (COE).If that doesn't help, they can always Eternally Raise Prices (ERP) on the roads.If you don't ownacar, you can always makeaMad Rush to the Train (MRT),OR get squashed inabus Side By Side (SBS).
Lastly, under all these pressures, there are not many places we can relax,Not even the good old place we used to go because it has becomeSo Expensive and Nothing To See Actually (SENTOSA)!!!
HDB= Housing Development Board # Highly Dangerous Building
PAP= People's Action Party # Pay And Pay
PUB= Public Utilities Board #Pay Until Broke
CPF=Central Provident Fund Cash Prior to Funeral or Coffin Provision Fund # Cash Prior to Funeral
NUH=National University Hospital# Never Use Heart
SGH=Singapore General Hospital# Sure Giveup Hope
ERP=Electronic Road Pricing # Everytime Raise Price
MRT=Mass Rapid Transit# Mad Rush to Train
SBS=Singapore Bus Service # Side by Side
SENTOSA = So Expensive and Nothing To See Actually
(မမဝါဝါ လာရင် MRT (Mad Rush to the Train) ကြီး စီးပြီး ဈေးကြီးပြီး တကယ်ဘာမှ ကြည့်စရာမရှိတဲ့ Sentosa ကို သွားကြတာပေါ့ဗျာ။
Posted by puluque at Wednesday, August 26, 2009 13 comments Links to this post
Labels: စင်္ကာပူ ဘဝ
Posted by puluque at Friday, August 21, 2009 14 comments Links to this post
ယနေ့ မြန်မာပြည် အက်ဥပဒေအရ မိမိရော သူခိုးပါ ထောင်ကျနိုင်သည်။
(သယ်ရင်းတစ်ယောက် ဂျီတော့ မက်စေ့မှာတွေလို့ သဘောကျပါသဖြင် တင်လိုက်ပါသည်)
Posted by puluque at Friday, August 14, 2009 10 comments Links to this post
Posted by puluque at Thursday, August 06, 2009 12 comments Links to this post
ဘယ်သူမှလဲ မဖိတ်၊ ဘယ်သူနဲ့မှလဲ မသိ၊ သွားမယ်လို့လဲ အစီအစဉ်မချထားပေမဲ့ ရောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ နှောင်းနွေဆုံမှတ် လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ sp သင်္ကြန်ပွဲကိုပါ။
သူတို့တွေ ဒီလို ဓါတ်ပုံစုရိုက်ကြတော့လဲ ကျောင်းတော်ကြီးကို သတိရနေမိတယ်။
ကြေငြာထားတဲ့ စတင်ချိန်ထက် ၁နာရီကျော်နောက်ကျပေမဲ့ ဖြေဖျော်တင်ဆက်မှုလေးတွေက ကျတော့ရဲ့ ညစ်နေတဲ့ စိတ်ကို ပြန်လည်ကြည်နူးစေပါတယ်။
ပွဲချိန်မှာ ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖို့ ပြောထားပေမဲ့ တန်ဆောင်မုန်းနက္ခတ်သမားမို့ ရသလောက်တော့ ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါက ဘရိတ်တိုင်း မှာ snack စားပီး နားနေချိန်မှာ ကျတော် တွေရာမြင်ရာကို ရိုက်ထားတာဗျ။ တိုက်ပုံဖြူဖြူ၊ပိုးပုဆိုး.ရွှေအိုရောင်ဆံပင်နဲ့ မြန်မာ ညီငယ်လေးတွေကို လဲတွေ့ရသဗျ။ အပြင်မှာဆို ရွှေစစ် မစစ် ခွဲလို့ လုံးဝမရလောက်နိုင်အောင် လန်တဲ့ ညီမငယ်လေးတွေကိုတော့ ငေးမောကြည့်ရတာလဲအမောရယ်။
နားချိန်ပီးတော့ နှစ်ပါသွားပါ ။ ကျတော်လဲ ချိန်းထားတာရှိနေတာကြောင့် နှစ်ပါးသွား တစ်ဝက်ပဲကြည့်ပီးပြန်ခဲ့ရတယ်။ ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်းလဲ လွတ်သွားသဗျ။ ဒီပွဲမှာနေတုန်း ကျတော့ အသက် တစ်ဝက်လောက်ငယ်သွားတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ ပွဲလဲပီးကော ငါအသက်တော်တော်ကြီးနေပါပကောလားလို့ သံဝေဂရသွားသဗျ။။။။
Posted by puluque at Sunday, August 02, 20097comments Links to this post
Posted by puluque at Thursday, May 28, 2009 11 comments Links to this post
(photo: by google, ပုံထဲက အိတ်တွေက ပိန်နေတယ် ကျတော့တုန်းက ဖားပြုပ်တွေလို ဖောင်းကားနေ၏)
နိုင်ငံခြားပြန်တစ်ယောက်ရဲ့ ငြီးချင်းလား ကြွားချင်းလားမသိ????
နိုင်ငံခြားပြန်လို့ ဆိုနိုင်မလား။ စင်္ကာပူဆိုတာ အခုချိန်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက်တော့ အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်လိုပါပဲ။ သွားလိုက် လာလိုက်နဲ့ ။ (တစ်နှစ်တစ်ခါ ခွင့်ပြန်တာ အမိမြေချစ်တဲ့ သားတို့မီးတို့…ရန်ကုန်လေဆိပ်ကြီး စည်ကားနေ သူတောင်းစားတွေ ဒုနဲ့ဒေး….အော်မှားကုန်ပါပီး စွယ်တော်ရိပ် သံချပ်တွေနဲ့)
စလုံးရောက်စ ပုလုကွေးရဲ့ နေ့ရက်တွေ ဟာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုမလားပဲ။ ယောင်္ကျားလေးတန်မဲ့ မျက်ရည်ကျသလားဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျပါတယ်..မားမား၊ ပါးပါးကို လွမ်းတာကိုး..အိမ်နဲ့လဲ အကြာကြီးမှမခွဲဘူးတာ။ ဖုန်းပြောပီး ငိုငိုခဲ့တာက ၂ ကြိမ်လား မသိ။ ပီးတော့ အလုပ်မလုပ်ဘူးတော့ အလုပ်ရဲ့ ပရက်ရှာတွေလေ။ နောက်ပိုင်းတော့လဲ နေသားကျသွားတာပေါ့လေ။
ပုလုကွေး အတွက်တော့ ကံကောင်းတာက စလုံးရောက်စမှာ နေစရာအိမ်အတွက်မပူရ၊ အခန်းခလဲမပေးရ။ အားလုံးကို အချစ်ဆုံးသယ်ရင်းက စီစဉ်ပေးထားတယ်လေ။ ပီးတော့ စလုံးက ယာဉ်တွေ စီးဖို့အတွက် Ez link ကဒ်က အစ၊ ဖုန်းကဒ်အဆုံး သူပဲစီစဉ်ပေးထားတာ။ ဘယ်သူလဲသိလား၊ တစ်အိမ်ထဲ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် သယ်ရင်းကြီးပေါ့။
ပုလုကွေး စလုံးလာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ တစ်ချို့သောသယ်ရင်းတွေက အံသြကြတယ်။ ဘာရူးတာလဲပေါ့။ မိဘအလုပ်ကို မလုပ်ပဲ ဘာလို့များ သူများအလုပ်ကို လုပ်ချင်ရတာလဲပေါ့။ ပုလုကွေးမိဘတွေကလဲ သဘောတူတယ် လာဖို့ကိုလေ။ အိမ်က အဓိက စီးပွားရေလုပ်ငန်းကို ပါးကြီးက ဦးစီးနိုင်သေးတယ်။ ပုလုကွေးကလဲ အိမ်က အလုပ်ကို သိပ်စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ စလုံးမှာ အောက်အီးသီးခံပီးနေခဲ့ရတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ စလုံးရောက် ပီး ၁၁လနဲ့ ခုနစ်ရက်မှာ ပြည်တော်ပြန်ခဲ့တယ်။ ပြည်တော်ပြန်တို့ရဲ့ထုံးစအတိုင်း ပထမဆုံးဆက်ကြေးပေး ..အဲမှားလို့ အခွန်ဆောင်ရတာပေါ့။ အခွန်ဆောင်ရတာက spass သမားတွေထုံးစံ ၈၀ ဆိုပေမဲ့ ၆၀လောက် ၇၀လောက်ရလဲ နဲလားဆိုပီး အန်တီဖက်တီးကြီးကို ငိုပြရတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ၇၀နဲ့ဈေးတည့်သွားတာပေါ့လေ။
ကဲဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ကိစ္စ။ လူတကာက နိုင်ငံဂျားပြန်ဆိုရင် အထင်ကြီးပီး ဟိုလက်ဆောင် ဒီလက်ဆောင်မျှော်တက်ကြတာ ထုံးစံရယ်။ ပုလုကွေးလည်း ဝယ်ဖို့ ချမ်းဖို့ ပြင်ရတာအမောရယ်။ ပါးပါးမားမား ဖို့က တစ်မျိုး။ တစ်ဦးတည်းသော အမအတွက်ကတစ်မျိုး။ နောက် အိမ်နီးချင်းတွေ ဆွေမျိုးမကင်းတွေ အတွက်က တစ်ဖုံဝယ်ရတာ ဖတ်ဖတ်ကိုမောနေတာပဲ။ ကို့ပိုက်ပိုက်နဲ့လဲ ကိုယ်ချိန်နေရသေးတာကိုး…။
မားမားကြိုက်တဲ့ ပင်နဆိုးနစ် ထမင်းပေါင်းအိုးရှာ၇တာက တစ်ဒုက္ခ။ ပီးတော့ ဂျပန် ခွက်ကလေးတွေ အစုံဝယ်ရတာကတစ်မျိုး။ မားမားနဲ့ မကြီးအတွက် လက်ကိုင်အိတ် ဝယ်ရတာကတစ်ဖုံ။ ယောင်္ကျားလေးတန်မဲ့ ဗိုက်ဖုံးအင်္ကျီ ရှာရတာက လဲ တစ်ဒုက်ခရယ်။ စလုံးမတွေ ဝတ်တဲ့ အင်္ကျီ ရှည်ရှည်ကို မကြီးက ဗိုက်ဖုံးအင်္ကျီပုံစံမျိုး ဝတ်ချင်သပ ဆိုလို့ Esprit သွားပီး မျက်နှာပူပူနဲ့ ဝင်မွှေရတာတဲ့ အကြိမ်လဲမနည်းဖူးဗျ။(စိတ်မကောင်းစရာက ကျတော့တူလေးလား တူမလေးလားမသိတဲ့ သူကလေးဟာ လူ့လောကထဲကို ရောက်ရှိမလာခဲ့ဖူး)
နောက်ပီး မာမီအတွက် ခြံပုဝါလေးတွေ ဝယ်ရတာကလည်း မသေးဘူးခင်ဗျ။ (ဒါတောင်မားမားက အနီရောင်နဲ့ အညိုရောင်မပါသေးဘူးတဲ့ …ခုနှစ်ထည်လောက်ကို သူတစ်ဦးထဲ မောင်ပိုင်စီး သွားတယ်လေ..) ကျတော့ဆရာမအတွက်တောင် တစ်ထည် မနည်းပြောယူထားရတာ…ဟိဟိ သိရင်စိတ်ဆိုးမှာ…)။
နောက်ပီး အိမ်က ဒရိုင်ဘာတွေ စပယ်ယာတွေ အတွက်။ ဘာဝယ်၇မလဲ.ဈေးလဲသက်သက်သာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘလန်နို ရှပ်တွေကို ၁၀ထည်လောက်ဆွဲသွားရတယ်ခင်ဗျား။ ဒါတောင် မရတဲ့သူက သားကြီး ဘယ်မှာလဲ လက်ဆောင်ဆိုတော့ ဟီး ဟီး ဆိုပီး သွားဖြဲပြ၇တယ်။ စလုံးက လူရဲ့ဒုက်ခ ကို သူတို့မသိဘူး။
နောက်ဆွေမျိုးမကင်းတစ်ကင်းတွေ အတွက် ရေမွှေး..မူစတာဖာသွားပီး revelon ရေမွှေး ၁၅ ပုလင်းလောက်ကိုလဲ ထိုးသိပ်ခဲ့ရသေးသဗျ။
အိမ်က ခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေ ကောင်လေးတွေ အတွက်ကတော့ လက်ပတ်နာရီတစ်လုံးစီ ကို မြန်မာပြည်က မာမီကို ကြိုတင်အချိန်းအချက်လုပ်ပီး ဝယ်ခိုင်းထားရတယ်။ စလုံးမှာက ဈေးကြီးတယ်လေ။ ဟိုရောက်တော့ စလုံးက ဝယ်လာသလိုလိုနဲ့ ညာတာပါတေးပေါ။ အဲဒါကလဲ တစ်ဒုက္ခ။
နောက်ပီး ကျတော့တို့ ငယ်ငယ်ကတည်း အိမ်မှာ အမြဲလာကူပေးနေတဲ့ ဒရိုင်ဘာမိန်းမအတွက်၊ သူ့ သားနဲ့သမီးအတွက် အင်္ကျီ ..ဒါကိုလဲမာမီကို ပဲ အပူကပ်ပီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် မြန်မာပြည်က ပဲကြိုဝယ်ခိုင်းထား၇သေးသဗျ။ သူတို့အတွက်ကလဲ မပါလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ သူတို့က ကျတော်ပြန်လာပီဆို သီမ်းစရာတွေ ဘာတွေကို ဒိုင်ခံသိမ်းပေး၊ စားစရာတွေကို ဒိုင်ခံကြော်လှော်ပေးနေကျ။ အိမ်က အောက်ခြေသိမ်းကို သူတို့ပဲလုပ်ပေးနေတာ။ ပဲခူးစိန်ဟင်းက ပစ္စည်းတွေ ဟာ စလုံးဖြစ် ဖြစ်လိုဖြစ်ပေါ့ဗျာ။
အော်ပြောဖို့မေ့နေတာ။ အချစ်ဆုံးသူမ(သယ်ရင်းနော် တလွဲမတွေကြနဲ့) အတွက် လက်ဆောင်။ သူမဖို့ ရေမွှေး ကောင်းကောင်းလေးရယ်။ ကျတော်ကော သူမကော ကြိုက်တဲ့ အစိမ်းရောင်..ပိုက်ဆံအိတ်..နောက်ပိး နောက်ပိး…သူမအတွက် လက်ဆောင်တွေပေါ့။ ဒါကတော့ ဒုက္ခမဟုတ်…သုခဗျ (ဘယ်သူလဲဆိုတာ မပြောနဲ့နော် တက်ထားတဲ့ မမရေ)။
သယ်ရင်းအထီးတွေအတွက် esprit၊ G2000, girodano နဲ့ hang ten အမျိုးမျိုးပေါ့။ သယ်ရင်းမတွေ အတွက် ပိုက်ဆံအိတ် အသေးလေးတွေ။
နောက် မချစ် တချစ်တွေ အတွက်ကော လက်ဆောင်တွေပေါ့။ ဘယ်သူတွေလဲ မမေးနဲ့ ပြောဘူး အသေသတ်။
ကဲဝယ်စရာတွေ ဝယ်တာစုံတော့ ပြည်တော်ပြန်ဖို့လေဆိပ်ကို ဆင်းပေါ့။ baggage က အသေးတစ်လုံး အကြီးတစ်လုံး။ ကျောပိုးအိတ်ရယ်၊ လက်ကဆွဲတာ တစ်ထုတ်ပေါ့။ ဟီး ဟီး ။ baggage အကြီး က ကီလို ၃၀ ကွတ်တိ။ အသေးက ၁၀ကီလိုကျော်နေတော့ ဆောင်ပေအုံးတော့ ဒေါ်လာ ၂၀ ။ ပလုံ ပလုံ။ လေဆိပ်ဆင်းတာက တစ်ယောက်ထဲ။ သောကြာနေဆိုတော့ ဘယ်သူမှမလိုက်ပို့နိုင်။ တစ်ယောက်ထဲ ဒုက်ခတွေနဲ့ပေါ့။ gate pass ဖြတ်တော့ အခုပဲထည့်ထားလိုက်တဲ့ လက်မှတ် ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ ရှာပေအုံးတော့ တစ်ယောက်ထဲ။ လူက ထူပီး ဘာမှမမြင်တော့ဘူး။ နောက်မှတွေတော့ အထဲဝင်။
မြန်မာပြည်ဝင်တော့ လက်ကျန်ခြင်္သေ့ ၃ကောင်ညှပ်ပေးတာတောင် သူများတွေက စလုံးပေးတယ်တဲ့။ ညီက ခြင်္သေ့တွေတဲ့ အစ်ကိုတို့ ကို စေတနာမရှိဘူးလားတဲ့။ ပုလုကွေး ဘီလိုပြောရမလဲဟင်။ အိတ်ထဲမှာ ကျန်တာဆိုလို့ စလုံးငွေ ၃၀ကျော် ၄၀နီးပါးရယ်။ ဘီလိုမှ မပြောတော့ပဲ မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ ဘဏ်ကဒ်ထဲမှာကလည်း သယ်ရင်းကြီး ဆီက ချေးလာတဲ့ စလုံး ၅၀၀မှာ ၂၀၀ကျော်ကျန်တာရယ်။
ဒီလိုနဲ့ Baggage ကိုရွေး။ အကောက်အခွန်ကို ဖြတ်။ မားမားရဲ့ ကြိုဆို အနမ်းတွေကိုခံယူရင်း အမိမြေကို နိုင်ငံဂျားပြန်တစ်ယောက် ခြေချခဲ့တယ်။ အမိမြေမှာ သုံးစရာဆိုလို့ ခြူးတစ်ပြားမှ မရှိ။ ဒီတော့လဲ ပါးကြီးဆီက ပေးတဲ့ မုန်းဖိုး ၂သိန်းခွဲ။ မားမီပေးတဲ့ ၁သိန်းခွဲ၊ မကြီးပေးတဲ့ မုန့်ဖိုး ၁သိန်းနဲ့ သယ်ရင်းတွေကို ဟိုဟာဝယ်ကျွေး၊ ဒီမှာဧည့်ခံ သုံးဖြုန်းခဲ့ရတာပေါ့။ ကျတော် လစဉ်လွှဲထားတဲ့ ပိုက်ပိုက်ကတော့ အလျော့ခံလို့ ဖြစ်မလားဗျ။ မိန်းမယူဖို့ စုထားတာ၊ တိုးပွားအောင် အတိုးပေးထားတာကိုး ..ဟိဟိ။(နောက်တာနော် အတည်ပြောတာ)
(ငြီးချင်းကလဲ အကြွားပို့စ် ဖြစ်သွားရင်လဲ ခံရုံမှတစ်ပါးအခြားမရှိ။ ကျတော့ မှာ ငြီးစရာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတာ။ အရင်းနှီးဆုံးသယ်ရင်းတွေပြောပြောနေတဲ့ ဟန်းဖုန်း ခုနှစ်လုံး၊ ဆယ်ဘီးကားလေးစီးကလဲ ကျတော်ပိုင်တာမဟုတ်ပါကြောင်း(ဆိုင်သာဆိုင် မပိုင်ပါ)။ ပို့စ်ဖက်ပီး သိပ်အထင်မကြီးပါနဲ့ခင်ဗျား ပုလုကွေးတို့အိမ်ကရန်ကုန်ကနေ မိုင်၆၀ သုံးဖာလုံတိတိ မှာရှိ့ပီး ရွာမှာနေတဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်ပါ)
မမဝါဝါ ရဲ့ တက်စ်ပို့စ်လေးကို အဆုံးသတ်ရင်း ဆက်တက်မှာက တက်စ်ပို့ဆို ရေးလေ့မရှိတဲ့ တောင်ငူသား၊ နောက်ပီး ကျတော့ကို နာမည်ဖျတ်ပီး ကိုကိုးဂွေးလို့ခေါ်တဲ့ အသက်လေး ။ နှစ်ကျောင်းအတူဆင်း သယ်ရင်းကြီး july…ဒါဆိုတော်လောက်ပါပီထင်ပါတယ်)
Posted by puluque at Monday, May 25, 2009 12 comments Links to this post
phyu22: ဟေ စနေနေ့က ဘယ်သွားနေလဲ
puluque: အွန် ..ဘယ်မှမသွားပါဘူး၊ ရုံးကိုလေ။
phyu22: စီတီးဟော မှာတွေ့တယ်နော်
phyu22: ပြောဖူး သတ်..ဘာသွားလုပ်တာလဲ
puluque: ဘယ်အချိန်လဲ ပြောမှ အမှန်ပြောလို့ရမှာ ၂ခါတောင်လေ။ နေလည် ၃ နာရီ ရုံးကဆင်းပီး မန်းမန်းသွားစားတာ။ ညနေက ညီတစ်ယောက်နဲ့ ခနသွားတာ။
phyu22: မန်းမန်းက ဘယ်မှာစား…
phyu22: လွိုင်နိုင်း ?
puluque: သိဘူးလား ဆိုင်အသစ်လေ ဖွင့်တာတောင် နည်းနည်းကြာပီး ရှမ်း အစားအစားတွေရတယ်
puluque: Rolex နာရီဆိုင်မျက်စောင်းထိုးမှာ၊ မြေညီထပ်မှာပဲ…ပုံပို့လိုက်မယ် ကြည့် ရိုက်ခဲ့တာ
phyu22: ဘာအစား အစာတွေရလဲ ကောင်းလား
puluque: ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ တို့ဖူးနွေး..ကောင်းတယ် ရှယ်ပဲ နောက်ပီး ရှမ်းထမင်းချဉ်…စားချင်သွားအောင် ပုံပါ ပြမယ်
puluque:ဆိုင် အတွင်းပိုင်း အပြင်အဆင်ကလဲ မိုက်တယ်နော် သွားကြည့်လိုက်
puluque: ဟုတ်တယ် နာမည်ကြီး အာခီတက်ချာ ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပဲဗျ..
phyu22: ဟုတ်လား စိတ်တောင်ဝင်စားသွားပီ
puluque:နောက်ရှိသေးတယ် ..စားဖို့ ဝက်သားချဉ်တဲ့ ။ စားဖူးလား။
puluque:မစားဖူး၇င် ပုံအရင်ကြည့် ရိုက်ခဲ့တာ…
phyu22:နင် ရိုက်ခဲ့တာတွေက နင်စားခဲ့တာတွေပေါ့
puluque: ဒီလိုပဲပေါ့ ဟ ဟ။သွားစားကြည့်လိုက်နော်
phyu22: အင်းပါ ဒီပိတ်ရက် သွားမယ်……
puluque: အိုကေပါ …c u..
(ရှမ်းခေါက်ဆွဲ . တို့ဖူးနွေး နဲ့ ဝက်ခေါင်းသုပ်ပုံတွေကိုတော့ တင်ပေးတော့ဘူးနော်.. ..)
Posted by puluque at Tuesday, May 19, 2009 11 comments Links to this post
ထူမတ်နိုင်ဖို့ တတိယ အချစ်ကို
(ဆယ်နှစ်ကြာအောင် ပျိုးခဲ့ရတဲ့ ခါးသက်လှတဲ့ အချစ်ပန်းသုံးပွင့်ကို ကဗျာတစ်ပုဒ် အနေနဲ့ သီးကုံးလိုက်ပါတယ်။ အဲ..ဒါဟာ ကဗျာလို့ မဆိုနိုင်ဘူးထင်တယ်နော်။ စာစုလေးတွေပေါ့ဗျာ...)
Posted by puluque at Friday, May 15, 2009 8 comments Links to this post
Posted by puluque at Sunday, May 10, 2009 8 comments Links to this post
Posted by puluque at Tuesday, May 05, 20095comments Links to this post